Mpandresin’ny Paritana: haneho vokatra vaovao i Dwa | NewsMada
Mpandresin’ny Paritana: haneho vokatra vaovao i Dwa
“Empreintes” na marika. Io ny lohahevitry ny fampirantiana ny sanganasan’ilay mpanao tantara an-tsary, “Bande dessinée”, i Dwa, hotanterahina any amin’ny Cité international des arts, any Paris, ny 21 hatramin’ny 29 novambra izao. Hahaliana ny hetsika, manamarika fotoan-dehibe ho an’ity mpanakanto malagasy ity.
Hanehoan’i Dwa ny zava-bitany tao anatin’ny “Résidence de création” na ny fivahiniana narahina famokarana, nataony tany Paris, nandritra ny roa volana, ity fampirantiana ity. Raha tsiahivina, norombahin’ity mpanakanto ity ny loka Paritana andiany faharoa, natao tamin’iny volana febroary teo iny. Anisan’ny fankasitrahana azy izao fampirantiana nialohavana “résidence” izao.
Mampiavaka ny sanganasan’i Dwa ny fanaovana sary amina lasitra lehibe. Heverina fa mbola ho hita taratra izany, saingy hitondra zava-baovao izy amin’ny fomba fanaovana sary. Eo koa ny hafatra fonosin’ny tantara an-tsary, izay, matetika, tsy misaraka amin’ny zava-misy eny an-dalambe eny, ny tranga any ambanivohitra any ary koa ny hitany nandritra ny fivahiniany any Paris.
Rehefa vita ny any ivelany, antenaina ny hitondrana izao vokatra vaovao izao aty an-tanindrazana, hahitan’ny Malagasy, indrindra ireo tanora maro milomano ao anatin’ny tontolon’ny sary, ny zava-bitan’i Dwa.